I-Valley Cottage - I-Airbnb
Saint-Jean-de-Boiseau, Pays de la Loire, i-France
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Luc Et Muriel
U-Luc Et Muriel Ungumbungazi ovelele
Le gîte emnandi engu-43m2 elungiswe ngokuphelele nge-mezzanine itholakala esakhiweni esihle edolobhaneni laseSaint-Jean-de-Boiseau. Uzozithola uphakathi kweNantes nolwandle, phakathi kwedolobha namaphandle, eLoire ngomzila webhayisikili (uhambo lwemizuzu engu-5 ukusuka emaphethelweni eLoire). Ikotishi liseduze nazo zonke izinsiza (imakethe encane, indawo yokubhaka, i-bar-tobacco-press, ikhemisi, iposi ...).
Le duplex inomnyango ohlukile (ukufinyelela okuqondile ukusuka emgwaqeni), phezulu igumbi lokuphumula elibanzi nelikhanyayo, eduze nendawo yokulala. I-mezzanine enombhede womuntu ngamunye ibheke leli gumbi.
Ikhishi lihlome ngokuphelele: i-ceramic hob, ifriji, i-microwave, i-French press, i-toaster, isipika se-bluetooth, umenzi wekhofi, iketela likagesi nesicoci se-vacuum.
Indlu yokugezela ineshawa yokungena.
ubusuku obungu-7 e- Saint-Jean-de-Boiseau
4.90 · 270 okushiwo abanye
Indawo yokulala ibheke indlela emnandi engasemngceleni we-Loire, ezokuholela emizileni embalwa yokuhamba ngezinyawo. Kulo muzi othule kukhona futhi inqaba yasePé kanye namakamelo abaculi bayo (imisebenzi ye "Voyage à Nantes").
Eduze, ungakwazi ukujabulela emzini Nantes (15 amaminithi), ulwandle (30 amaminithi), echibini indlu ka Grand-Lieu (10 amaminithi), epaki isilwane "Planète Sauvage" (15 amaminithi).
Ibungazwe ngu-Luc Et Muriel
Sihlala eduze nendawo yokuhlala futhi singakuhlalisa. Futhi singaphendula imibuzo yakho futhi sikunikeze iseluleko mayelana nokuvakasha, ukuhamba ngezinyawo noma izindawo zokudlela.
ULuc Et Muriel Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 818852006 00019